Ny Motor Hydraulic dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Ny modely BMER BMH dia azo ampiasaina hanoloana ny modely Original Parker TG/TJ/TE. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy aorian'ny varotra tsara indrindra.
Ny paompy fitaovana dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. azo ampiasaina hanoloana ny maodely paompy faobe roa voalohany Rexroth. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy aorian'ny varotra tsara indrindra.
Rexroth double gear paompy
Kamiao paompy A11VLO130LRDU2/11R-NZD12K02P-S Rexroth Main Oil Pump
Ny paompy hydraulic dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Modely A11VLO130 dia azo ampiasaina hanoloana ny maodely Original Rexroth A11VLO130. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy aorian'ny varotra tsara indrindra.
Rexroth A11VO60LRDS/10R-NZC12N00/A11VLO130 paompy menaka
Ny paompy hydraulic dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Ny modely A11VO60 dia azo ampiasaina hanoloana ny modely Original Rexroth A11VO60. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy tsara indrindra aorian'ny varotra.ELEPHANT Fluid Power dia manam-pahaizana momba ny herin'aratra hydraulika mampiditra ny mixer betonika matihanina (kamiao paompy) rafitra hydraulic manohana, fikojakojana ary famatsiana kojakoja.
Kamiao paompy simenitra A4VG125/A4VG180 Rexroth paompy menaka lehibe
Ny paompy hydraulic dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Modely A4VG125/A4VG180 dia azo ampiasaina hanoloana ny maodely Original Rexroth A4VG125/A4VG180. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy tsara indrindra aorian'ny varotra.ELEPHANT Fluid Power dia manam-pahaizana momba ny herin'aratra hydraulika mampiditra ny mixer betonika matihanina (kamiao paompy) rafitra hydraulic manohana, fikojakojana ary famatsiana kojakoja.
Rexroth A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S paompy menaka lehibe
Ny paompy hydraulic dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Modely A11VLO190 dia azo ampiasaina hanoloana ny maodely Original Rexroth A11VLO190. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy tsara indrindra aorian'ny varotra.ELEPHANT Fluid Power dia manam-pahaizana momba ny herin'aratra hydraulika mampiditra ny mixer betonika matihanina (kamiao paompy) rafitra hydraulic manohana, fikojakojana ary famatsiana kojakoja.
Paompy menaka Rexroth A11VLO190
Ny paompy hydraulic dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Ny modely A11VLO190 dia azo ampiasaina hanoloana ny maodely Eaton A11VLO190 tany am-boalohany. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy tsara indrindra aorian'ny varotra.ELEPHANT Fluid Power dia manam-pahaizana momba ny herin'aratra hydraulika mampiditra ny mixer betonika matihanina (kamiao paompy) rafitra hydraulic manohana, fikojakojana ary famatsiana kojakoja.
Rexroth A11VO40DRG/10R-NPC12N00 paompy hydraulic
Ny paompy hydraulic dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Ny modely A11VO40 dia azo ampiasaina hanoloana ny maodely Eaton A11VO40 tany am-boalohany. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy aorian'ny varotra tsara indrindra. ELEPHANT Fluid Power dia manam-pahaizana momba ny herin'aratra izay mampiditra ny mixer simenitra matihanina (kamiao paompy) rafitra hydraulic manohana, fikojakojana ary famatsiana kojakoja.